प्रचलनमा आयो ई–पासपोर्ट, कति तोकियो शुल्क ? – Smartkarnalinews
प्रचलनमा आयो ई–पासपोर्ट, कति तोकियो शुल्क ?
बुधबार, मंसिर १, २०७८ 8:12:40 PM	मा प्रकाशित
सरकारले बुधबारबाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण शुरु गरेको छ । राहदानी विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन भर्ने नागरिकले बुधबारदेखि नै ई–पासपोर्टको लागि औंठाछाप (बायोमेट्रिक) दिन जाने मिति र समय पाउन थालेका छन् । करिब ७० लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गरेपछि सरकारले ई-पासपोर्ट वितरण थालेको हो ।
हेर्नुहोस् विभागले तोकेको दस्तुर :
प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर १, २०७८ 8:12:40 PM